Isku dayga inaad wax walba hagaajiso | Laga soo bilaabo Linux
Isku dayga inaad wax walba hagaajiso
Dhamaan waad salaaman tihiin:
Waxaan ku guda jirnaa xallinta dhibaatadan oo dhan. Waa suurtagal in laga bilaabo xilliga aan bilowno inaan isbeddelada sameyno, saameynta qaar dib ayaa loo arki doonaa. Waqtigan xaadirka ah waxaan nafteena kaliya marin buuxda u leenahay blog. Xaaladda durba waa mid quus ah. Wixii loo baahnaa inay noqdaan wax fudud ayaa isu rogay fowdo. Waxaan ka raali galinaynaa waxaas oo dhan .. 🙁
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Isku dayga inaad wax walba hagaajiso
Elav, hadaad ubaahantahay wax caawinaad ah, igu xisaabtam, inkasta oo aanan waxba ka aqoon maamulka shabakada ama barnaamijyada, hadana waxaa la iga heli karaa twitterka, facebook iyo G +, iyo, dabcan, boostada!
Ha walwelin, aakhirka way soo bixi doontaa, iyadoo dulqaad leh ... Haatan wax walba waan geli karaa, ee ma ahan kahor.
Waxaan ku darayaa waxa wakiilka isticmaalaha kor ku muujiyo (midka ku saabsan distro), horeyba aniga ayuu iigu shaqeeyaa (midigta), ka hor inta aysan kalabar u dhigmin
Thanks mahadsanid15. Shalay waxaan si kadis ah u qaatay fursad aan ku hagaajiyo koodhka xoogaa, laakiin wali waa inaan wax ka beddelaa sawirada goor dambe the
Waad ku mahadsan tahay sheegistaada, faahfaahsan wuxuu sameeyay qorshe oo sida muuqata ... waa inuu ahaa mid lagu wada hagaajiyay all
Blog-gu wuxuu horeyba iigu muuqdaa qaab caadi ah. Samirka sii wad, iyo nasiib wacan.
maxaa dhacaya oo aanan garanayn? @elav waa maxay dhibaatada quusta ah ee ku haysata ??? wax ma ku caawin kartaa ???
Waligaa waxba kama ogaan kartid wax hahahaha.
ahahaha maxaa noqon doona ??? Waxaan arkaa inay wax walba hagaagsanyihiin for .Marka xigta waxaad iisoo diri kartaa emayl hadaad caawimaad ubaahantahay !!
Saaxiib deggan, oo aan laga quusan, kuwa naga mid ah ee la jaan qaadaya barta iyo madasha, waxaanan u malaynayaa in aan u hadlayo inta badan, waxaan ku sii socon doonnaa gunta gunta, dhibaatadan weligeed ma sii jiri doonto Waan ku siin karaa waa sidaad u jeceshahay, waxaan si buuxda u hubaa inay wax walba si fiican u soo baxayaan.
Madashu way shaqeysaa.
Waad degaysaa, sidoo kale waxaan haystay iyaga bilo ka hor aniga oo wata serverka aan ku martigaliyo websaydhka ururka aan ka tirsan ahay.
Relaaaax sida Oscar u yidhi, kuwa naga mid ah ee raacda balooggu ma joojin doono inay wax u qabtaan dhibaato yar awgeed.
Geesinimo, sidan ku soco, in muddo ah hadda waxay ahaayeen maalin walba waa in la arkaa.
Salaan ka timid Chile!
Cudur daar kama bixinayo iyaga, waa dhowr meelood ts
Kumaa raali galin lahaa Troll a .. Troll a waa la garaacay, no raali galin hahaha .. Macno malahan Eduar2, waan ku jecel nahay si lamid ah .. 😀
Dhammaan dadka na taageeraya ee na dhiirrigelinaya: Aad baad u mahadsan tihiin. Waan ognahay inaysan jirin wax qalad ah anaga oo soo bandhigeyna dhibaatooyinkaan, taasi waa, wax culus, laakiin ma jeclin inaan hoos udhaco oo aan awoodin inaan kula wadaagno. 🙁
Vah waxba ma dhacaan, haddii bogga Arch Linux uu dhaco markii uu dareemo sida uu yahay, in kan aan ururka lahayn ama miisaaniyaddu hoos u dhacday aysan macnaheedu ahayn.
Waa hubaal inay ku shaqeyneyso server-yada leh Arch 😛
lol kuma shaqeeyaan server-yada Debian, waad ka ogtahay xasiloonida ay ku leeyihiin. 😀
Hadaad kaliya ogaan laheyd waxa ka qaldan KZKGGaara ee laptop-kiisa leh Arch beryahan hahahaha
Waxba ha rajeynin, qoraal ayaan ka sameyn doonaa eso
Nin mise inuu Alaska joogay .. Waxba iima sheegi kartid shaqsiyan? Inaan kaa xigo nacalad !!!
Marka waad arki kartaa waxa dhacay: http://www.archlinux.org/news/wiki-and-bbs-downtime/
Horaan uga hadlay mar halkan:
Hmm .. ma keligay baa aan geli karin madasha ama microblog-ka?
Waa la iga mamnuucay XD
Waxaan balan qaadayaa inaan si fiican u dhaqmayo 😛
Hahahaha cidna kuuma mamnuucin ..
@elav Noo sheeg waxa ku dhacay Gaara oo leh qaansohiisa
Ma waxbaa ku dhacay qallafsanaanta Arch? hahahaha maxaa pton.
Hahahaha hadda waqti ka waqti, isaga oo aan waxba taaban ama cusbooneysiin, Bash wuxuu ku siinayaa qalad qunsuliyada oo (mararka qaarkood) ka dhigeysa shaashadda oo dhan madow Hahahaha
Debian iyo in ka badan oo Debian ah ayaa leh, hahahahaha.
Jooji adeegsiga daaqadaha windows ajjajajajaja
Ku jawaab pardo
Halkan ka dhaqaaqi maayo waan ku sugayaa ama sida ay halkan ka dhahaan Argentina waxaan dhigayaa inaan dhinto 😉
Mahadsanid bunni ^^
HAHAHA mahadsanid sxb, runti waa qaddartay 😀
Waxay u muuqataa in odayga maseyrka iyo super Debian-ka ay balooggan soo rogayaan
Oo waxaad siisaa isagoo isticmaalaya Unnamable, ka dibna waxaad hoos u dhigi doontaa carrabkaaga adigoo si xun uga hadlaya ubuntu, HAHAHAHAHAHA.
Shalay waxaan jeexjeexay kombuyuutarka Arch, taasi waa sababta, si kastaba ha noqotee, waxaan doorbidaa 1000 jeer inaan isticmaalo Magaca aan loo adeegsan karin Ubuntu
Macno malahan hadii lagugu qiimeeyo isku mid, waxaan la yaabanahay muxuu blogku ahaan lahaa adiga la'aanteed
In kasta oo aanan ka war hayn wax kasta oo dhacay, haddana waxaan sidoo kale taageero u dirayaa mashruucan weyn. Barta Linux ugu fiican ee Isbaanishka ah. Waxaan idhi! ... xD
Mahadsanid Ozcar ^^
Infographic: Taariikhda GNU / Linux hal sawir
Lens Qaar ka mid ah Ubuntu Dash